Askari dilay Wiil Dhalinyaro Ganacsade ahaa - Awdinle Online
Askari dilay Wiil Dhalinyaro Ganacsade ahaa
Wararka laga helayo degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ay sheegayaan in Askari ka tirsan Ciidamada Dowladda uu gudaha degmadaasi ku dilay Wiil Dhalinyaro ahaa oo kamid ahaa dadka ku nool degmadaas.
Wiilka la dilay ayaa waxaa lagu Magacaab jiray Abshir suubow,waxaana lagu dilay Goob Ganacsi uu ku lahaa Xaafada Xaawa Taako degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay Warbaahinta u sheegeen in Askariga dilka ka dambeeyay ay gacanta ku dhigeen Ciidamada Maamulka degmada,waxaana sababaha ka dambeeysa dilka lagu sheegay in askariga uuu sheegay in xabada ay kaga fakatay.
Dadka ku nool degmada Balcad ayaa waxaa ay qaarkood sheegeen inay aad uga walaaceen dilka loo geystay Wiilka Dhalinyarada ah oo Caanka ahaa degmadaas, kaas oo Goob yar oo Ganacsi ka Shaqeysan jiray.
Xildhibaan Maxamuud Xuseen Gudbaaye oo kamid ah Baarlamaanka Maamulka Hir-Shabeelle ayaa dalbaday in Cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyay dilka Wiilka Dhalinyarada ahaa.
Mas’uuliyiinta Maamulka degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha dhexe & Taliska Booliska degmadaasi weli kama hadlin dilka askari ka tirsan Ciidamada uu u geystay Wiilka Dhalinyarada ah.
Previous articleDowladda oo qaaday dhagxaanta ay ku xirtay wadooyinka Muqdisho+Sawirro
Next articleMadaxweynayaasha Soomaaliya & Ereteriya oo heshiis gaaray